JEHOVHA dzimwe nguva anoita zvinhu zvinoshamisa kuti adzivirire vaduku uye vasingagoni kuzvidzivirira. Kana uchifamba musango, unogona kuona imwe nzira iyo Jehovha anoita nayo izvi. Asi pakutanga ungasanzwisisa chaizvo zviri kuitika.
Unoona shiri ichimhara pasi pedyo newe. Inoita seyakakuvara. Inokweva rimwe remapapiro ayo ichitiza paunoedza kuswedera pedyo nayo. Sezvaunotevera shiri yacho, inongoramba iri mberi kwako. Zvino, shiri yacho inobva yangobhururuka yoenda. Bapiro rayo ranga risina kumbokuvara! Unoziva kuti shiri yacho yanga ichitei here?—
Pamhara shiri yacho pedyo newe, vana vayo vanga vakavigwa mumakwenzi. Amai veshiri ava vanga vachitya kuti ungaona vana vavo ukavakuvadza. Saka vaedzesera kunge vakakuvara vakakuita kuti ubvepo. Unoziva here kuti ndiani anogona kutidzivirira sezvinoita amai veshiri kuvana vavo?— MuBhaibheri, Jehovha anofananidzwa neshiri inonzi gondo, iyo inobatsira vana vayo.—Dheuteronomio 32:11, 12.
Amai veshiri ava vari kudzivirira sei vana vavo?
Mwana waJehovha anokosha pane vose ndiJesu
Mwanakomana wake anodiwa. Jesu paakanga ari kudenga, akanga ari munhu womudzimu ane simba kufanana naBaba vake. Aigona kuzvitarisira. Asi Jesu paakaberekwa somwana panyika, akanga asingagoni kuzvidzivirira. Aida kudzivirirwa.
Kuti azadzike zvaidiwa naMwari kwaari pasi pano, Jesu akakura akava munhu akakwana, murume akakura zvakakwana. Zvisinei, Satani akaedza kuuraya Jesu izvozvo zvisati zvaitika. Kuedza kuuraya Jesu kwakaitwa paakanga achiri mwana uye nzira idzo Jehovha akamudzivirira nadzo inyaya inofadza. Unoda kuinzwa here?—
Chinguva pashure pokunge Jesu aberekwa, Satani anoita kuti chinhu chakaita senyeredzi chipenye mudenga kuMabvazuva. Varume vanonzi vazivi venyeredzi—vanoongorora nyeredzi, vanotevera nyeredzi kwemazana emakiromita kuenda kuJerusarema. Vasvikako vanobvunza kwaizoberekerwa aizova mambo wevaJudha. Varume vanoziva zvinotaura Bhaibheri panhau iyi pavanobvunzwa, vanopindura kuti: “MuBheterehema.”—Mateu 2:1-6.
Pashure pekunge vazivi venyeredzi vashanyira Jesu, Mwari anovanyevera nezvechii chinoponesa Jesu?
Pashure pokunge Herodhi, mambo akaipa ari muJerusarema, anzwa nezvamambo mutsva uyu achangobva kuberekwa mutaundi riri pedyo reBheterehema, anoudza vazivi venyeredzi kuti: ‘Tsvakai mwana wacho mumuwane, mozodzoka kuzondiudza.’ Unoziva here kuti nei Herodhi achida kuziva kuti Jesu aripi?— Imhaka yokuti Herodhi ane godo uye anoda kumuuraya!
Mwari anodzivirira sei Mwanakomana wake?— Vazivi venyeredzi pavanowana Jesu, vanomupa zvipo. Gare gare Mwari anozonyevera vazivi venyeredzi vacho muchiroto kuti vasadzokera kuna Herodhi. Saka vanodzokera kumusha neimwe nzira vasingadzokeri nokuJerusarema. Herodhi paanoona kuti vazivi venyeredzi vaenda, anotsamwa kwazvo. Achiedza kuuraya Jesu, Herodhi anoita kuti vakomana vose vari muBheterehema vari pasi pemakore maviri vaurayiwe! Asi panguva iyoyo Jesu atoenda.
Unoziva kuti Jesu anopukunyuka sei here?— Pashure pokunge vazivi venyeredzi vadzokera kumusha, Jehovha anopa nyevero kumurume waMariya, Josefa, kuti asimuke otizira kure kuIjipiti. Ikoko Jesu akachengeteka pana Herodhi akaipa. Kwapera makore, apo Mariya naJosefa vanodzoka vachibva Ijipiti naJesu, Mwari anopa imwe nyevero kuna Josefa. Anomuudza muchiroto kuti aende kuNazareta, uko Jesu achave akachengeteka.—Mateu 2:7-23.
Jesu achiri mudiki anoponeswa sei zvakare?
Unoona here nzira iyo Jehovha akadzivirira nayo Mwanakomana wake?— Ndiani waungati akafanana nemanyana eshiri akavigwa naamai vawo mumakwenzi kana kuti akafanana naJesu paakanga ari mwana muduku? Hauna kufananawo nawo here?— Kune vanoda kukukuvadzawo. Unoziva kuti ndivanaani here?—
Bhaibheri rinoti Satani akafanana neshumba inodzvova inoda kutidya. Uye kungofanana neshumba dzinowanzodya mhuka duku, Satani nemadhimoni ake vanowanzonanga vana. (1 Petro 5:8) Asi Jehovha akasimba kupfuura Satani. Jehovha anogona kudzivirira vana vake kana kuti kugadzirisa zvakaipa zvose izvo Satani anoita pavari.
Unoyeuka here kubva muChitsauko 10 chebhuku rino izvo Dhiyabhorosi nemadhimoni ake vanoedza kutiitisa?— Vanoedza kutiita kuti tirare pamwe chete somurume nomukadzi tisina kuroorana, izvo zvinonzi naMwari hazvina kururama. Asi ndivanaani bedzi vanofanira kurara vose?— Vanhu vakura, murume nomukadzi vakaroorana.
Zvisinei, zvinosiririsa kuti vamwe vanhu vakura vanoda kurara nevana. Pavanodaro, vakomana nevasikana vangatanga kuita zvinhu zvakaipa zvavakadzidza kuvakuru ava. Vanotangawo kushandisa nhengo dzavo dzokubereka nadzo nenzira isiri iyo. Izvozvo ndizvo zvakaitika kare kare muguta reSodhomu. Bhaibheri rinoti vanhu vemo “vaduku navakuru,” vakaedza kurara nevarume vakanga vauya kuzoshanyira Roti.—Genesisi 19:4, 5.
Naizvozvo sokungoda kudzivirirwa kwaiita Jesu, newewo unoda kudzivirirwa pavanhu vakuru—uye kunyange vamwe vana—vangaedza kuda kurara newe. Kazhinji, vanhu ava vachaedzesera kuva shamwari dzako. Vanogona kunyange kutokupa zvimwe zvinhu kana ukavavimbisa kuti hauzoudzi vamwe pamusoro pezvavanoda kuita newe. Asi vanhu ava vane udyire, kufanana naSatani nemadhimoni ake, uye vanongoda kuzvifadza chete. Uye vanoedza kuwana mufaro uyu nokurara nevana. Izvi zvakaipa kwazvo!
Chii chaunofanira kutaura nokuita kana mumwe munhu akaedza kukubata-bata zvisina kururama?
Unoziva zvavangaita here kuti vazvifadze?— Vangaedza kubata-bata nhengo dzako dzakavandika. Kana kuti vachatokwizira nhengo dzavo dzokubereka pane dzako. Asi haufaniri kumbobvumira chero munhu kutamba nechirema chako kana kuti sikarudzi. Kunyange hanzvadzi yako chaiyo, amai kana kuti baba. Nhengo dzomuviri wako idzi dzakavandika.
Ungadzivirira sei muviri wako pavanhu vanoita zvakaipa zvakadai?— Kutanga, usabvumira chero munhu upi zvake kutambisa nhengo dzako dzokubereka nadzo. Kana mumwe munhu akaedza kuita izvi, taura zvakasimba nenzwi guru kuti: “Rega kudaro! Ndichanokumhan’arira!” Uye kana munhu iyeye akataura kuti zvaitika zvacho imhosva yako, usabvuma izvozvo. Hachisi chokwadi. Enda unomumhan’arira chete pasinei nokuti ndiani! Unofanira kuita kudaro kunyange kana akataura kuti zvamuri kuita pamwe ndezvenyu chete muri vaviri. Kunyange kana munhu iyeye akakuvimbisa kukupa zvipo zvakanaka kana kuti akakutyisidzira, unofanira kubva paari wonomumhan’arira chete.
Verenga pamusoro pokuzvidzivirira pazviito zvokurara nevanhu zvisina kururama, pana Genesisi 39:7-12; Zvirevo 4:14-16; 14:15, 16; 1 VaKorinde 6:18; na2 Petro 2:14.